တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်လွန်းလို့ Nation title ဆုတွေ ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ Korean အနုပညာရှင်(၁၂) ယောက် | Asia News Bar
တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်လွန်းလို့ Nation title ဆုတွေ ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ Korean အနုပညာရှင်(၁၂) ယောက်
Korea အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမှုကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုနဲ့ အားပေးတဲ့အားကို ကြည့်ပြီး တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။ fan တွေကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့ idol ကို “nation title” ရစေချင်ပြီး လူတိုင်း အသိအမှတ်ပြုအားပေးတာကို ဖြစ်စေလိုကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း nation title က idol တိုင်း လွယ်လွယ်ရနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ ပရိသတ်တွေသာမက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အားလုံးက ဝိုင်းချစ်ခင်ကြမှသာ ရနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခု Nation Title ရ ထားတဲ့ Korea အနုပညာရှင် ၁၂ ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
12. RAIN – “Nation’s Thief”
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Rain က တော့ နိုင်ငံရဲ့သူခိုး လို့ နာမည်ရထားပါတယ်။ ရီရအခက်ငိုရအခက်ပါ .. သူ့ကိုဘာလို့ ဒီနာမည်ပေးကြလည်းဆိုတော့ တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ ယောကျာ်းလေးတိုင်းရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ် မင်းသမီး Kim Tae Hee ကို Rain က လက်ထပ်ယူသွားလို့ပါတဲ့။
11. Seolhyun – “Nation’s IT Girl”
AOA အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ခပ်မိုက်မိုက် Body Structure ရှိသူ Seolhyun လေးရဲ့ style က လန်းလွန်းလို့ တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ကိုယ်စားပြု IT girl လို့ အားလုံးက ဝိုင်းနာမည်ပေးထားကြပါတယ်။
10. Park Bo Gum – “Nation’s Boyfriend” “Nation’s Crown Prince” , “Nation’s Man of Good Influence”
Moon light drawn by lights နဲ့ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသား Park Bo gum က တော့ Nation title ဆု ၃ဆု ရထားပါတယ်။ ထိုကားကြောင့်ဘဲ “နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားလေး” title အပြင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာသာမက အပြင်မှာပါ အကျင့်သိက္ခာကောင်းမွန်မှုကြောင့် နောက်ဆုနှစ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။
9. Lee Hyori – “Nation’s Fairy”
တချိန်က Fin.K.L အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့သူ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် Lee hyori ကတော့ “နိုင်ငံရဲ့ နတ်သမီးလေး” ဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။
8. Lee Seung Gi – “Nation’s Son-in-Law” and “Nations Uhm-Chin-Ah”
Lee Sung Gi ရဲ့ပုံစံ ကတော့ အမေတိုင်း လိုချင်ကြတဲ့ သမက်ပုံစံ သားယောကျာ်းလေးပါ။ ဒါ​ကြောင့် “Nation’s သမက်” ဆု ရထားရုံသာမက “Nations Uhm-Chin-Ah” ဆုလည်း ရထားပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “အမေ့သူငယ်ချင်းရဲ့ တော်ပြီးထက်မြက်တဲ့သားလေး” ဖြစ်ပါတယ်။
7. Yeo Jin Goo – “Nation’s Little Brother”
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝထဲက တနိုင်ငံလုံး ချစ်ခင်ရတဲ့ Yeo Jin Goo ဟာ ခုဆို အသံဩရှရှနဲ့ ယောကျာ်းပျိုကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့ကိုတော့ “နိုင်ငံရဲ့ မောင်ငယ်လေး” နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။
6. Yoo Seung Ho – “Nation’s Little Brother”
Yoo Seung Ho လည်း Yeo Jin Goo နဲ့အပြိုင် ကလေးသရုပ်ဆောင် ဘဝကနေ ခုထိ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အချစ်တွေရခဲ့ပါတယ်။
5. Kim So Hyun – “Nation’s Little Sister”
Kim So hyun လည်း သူ့ရဲ့ အနုပညာ ခရီးလမ်းကို ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကနေ စခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုလည်း အားလုံးက ချစ်ကြပြီး “နိုင်ငံရဲ့ ညီမငယ်လေး” လို့ နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။
4. Song Hye Kyo – “Nation’s First Love”
အွန်စောလို့ အသိများကြတဲ့ Song Hye kyo က တော့ တကယ့်ကို တနိုင်ငံလုံးသာမက တကမ္ဘာလုံးက သိကြပြီး ချစ်ခင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် “နိုင်ငံရဲ့ အချစ်ဦး” နာမည်ရ ထားတာ မလွန်ပါဖူးနော်။
3. Suzy Bae – “Nation’s First Love”“Nation’s Sweetheart”
Miss A အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သလို မင်းသမီးလည်း ဖြစ်တဲ့ Suzy Bae က တော့ အားလုံးအားကျရတဲ့ ကောင်မလေးပါ။ နာမည်ကြီး မင်းသားတိုင်းနဲ့ တွဲရိုက်ဖူးပြီး ရိုက်သမျှကားတိုင်းပေါက်တဲ့ သူမရဲ့ စန်းကို ဘယ်သူမှ မှီမယ်မထင်ပါဖူး။
2. Jun Ji Hyun – “Nation’s First Love”
သရုပ်ဆောင်ကြေးအမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Jun Ji Hyun က တော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ထွက်တာ ကျဲပေမဲ့ ရိုက်သမျှကားတိုင်း အရမ်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ CF Queen လို့ ဆိုရအောင် ကြော်ငြာတွေလည်း အရမ်းရိုက်ရပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေဆိုပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ပိန်သွယ်နုပျိုလှပနေတုန်းပါ။
1. IU – “Nation’s Little Sister” and “Nation’s Sweetheart”
IU ကတော့ အဆိုဘက်မှာလည်း အရမ်းထူးချွန်သလို သရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း အပိုအလိုမရှိသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို စွယ်စုံရပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးမို့ “နိုင်ငံရဲ့ အသည်းကျော်” လေး ဖြစ်နေတာပါ။
Next Lovelyz အဖွဲ့ဝင် Mijoo ကို လှတယ်လို့ ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai »
Previous « ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း နာမည်အ​ကျော်ကြားဆုံး ဖြစ်​နေတဲ့ ​ယောကျ်ား​လေး K-Pop အဖွဲ့များ
IU အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ G Dragon
သူ့ကို role model အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူတွေအတွက် Yoona ရဲ့ အကြံပေးစကား
ပြန်လည်မွေးဖွားခွင့်သာရမယ်ဆိုရင် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်ကြလဲ..